ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်းရမလိုလို | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်းရမလိုလို
ဒီဆောင်းပါးကတော့ ကျနော့်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွေးတချို့ကနေ ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ သမိုင်းသုံးသပ်ချက် အာဘော်ပါ။
ငယ်စဉ်က သူငယ်ချင်းများနဲ့ သမိုင်းကြောင်း စကားစမြည်ပြောရမှာ တယောက်တလေက “(၁၉၄၈) အင်္ဂလိပ်က လွတ်လပ် ရေးပေးတော့” ဆိုတာမျိုးပြောရင် “အင်္ဂလိပ်က ပေးတာမဟုတ်၊ အင်္ဂလိပ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးရအောင် ယူခဲ့ရတာ” လို့ ပြင်ပြောခိုင်းတဲ့အထိ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းကအစ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဘဲ ရှေးလူကြီးများ လွတ်လပ်ရေး အရယူခဲ့ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားခဲ့ပါတယ်။
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား၊ စစ်အတွင်းခရီးသည်၊ ဘုံဘဝမှာဖြင့် အစရှိတဲ့ ဝတ္ထု၊ ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းစာအုပ်တွေဖတ်ရင်း အမျိုးသားရေးစိတ်တွေ နိုးကြားခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီအမျိုးသားရေးစိတ်က သမိုင်း သုံးသပ်ချက်နဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်အပေါ် ပကတိအမြင်ကို မထိပါးစေပါဘူး။
မိုးမခ စာဖတ်သူများဆီမှာလည်း လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွေးများရှိခဲ့ရင် ပြန်ကြားချင်ပါတယ်။
ငယ်စဉ်က လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းစာအုပ်တွေဖတ်ရင်း လွတ်လပ်ရေးကို ချစ်မြတ်နိုးစိတ် နိုးကြားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြီးပြင်း ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရဲ့အရသာကို တစက်ကလေးမှတောင် မခံစားရတော့ပါဘူး။ ကျနော် ဟာ သမိုင်းကနေ သူ့ကျွန်ဘဝရဲ့ အောက်တန်းကျမှုတွေကို လေ့လာမိခဲ့သလို ကောင်းကွက်တွေကိုလည်း ကိုယ့်မျက်မှောက် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခေတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်း အတွေးမျိုးစုံ ကွန့်မြူးခဲ့ရပါတယ်။
● အင်္ဂလိပ် ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလဲ
သက်ဦးဆံပိုင် ပဒေသရာဇ်စနစ်ဆိုးကို စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် အခြေခံ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အစားထိုးခဲ့ တယ်။ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကို မိတ်ဆက်ပေး အခြေကျစေခဲ့တယ်။ စနစ်ကျတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ခေတ်လောကဓတ် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦတွေကို ထူထောင်ပေးခဲ့တယ်။ စပါး၊ ရေနံ၊ ကျွန်းသစ်နဲ့ သဘာဝသယံဇာတများ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်စီးပွားပြုမှုကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့တယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ကျွန် သက်ရှည်ရေး၊ အရင်းရှင်စနစ် စည်ပင်ရေးအတွက် ကုန်ကြမ်းပေါပေါရှာဖို့၊ ကုန်ချောများများ ရောင်းရဖို့အလို့ငှာ အင်္ဂလိပ်တွေ ကမ္ဘာအနှံ့က ကိုလိုနီဒေသတွေမှာ လုပ်ခဲ့တာတွေ နည်းတူပါပဲ။
ဥရောပနဲ့ အာရှကို ပိုမိုလွယ်ကူဆက်သွယ်ပေးနိုင်တဲ့ စူးအက်တူးမြောင်း (၁၈၆၉) ပြီးချိန်ကစလို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ဆန်စပါးကဏ္ဍဟာ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုလိုအင် အတွက်သာမက ပြည်ပပို့ကုန်အထိပါ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကနေ အခြေခံ လုပ်သားလိုအပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အိန္ဒိယတိုက်သား အများအပြား အခြေချမှုတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အင်္ဂလိပ်ရောက်လာလို့ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်မင်းဆိုးစနစ်က လွတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီခေတ်အခြေအနေအရ အင်္ဂလိပ်ဗြူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးဟာ အရင် အကြောင်းသုံးပါးမရွေးတဲ့ ဘုရင်ခေတ်အုပ်ချုပ်ပုံထက် အများကြီး ပိုကောင်းတယ်။ စီးပွားအခွင့် အရေးတွေလည်း ပွင့်လာတယ်။ နောက်ဆုံးမင်းဆက် သီပေါခေတ် (၁၈၇၈-၁၈၈၅) မှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခိုးဆိုးလုယက် သူခိုး၊ ဓားပြဒဏ် မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ မင်းမြှောက်ကပ်ပါးတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေအားလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်အောက်မှာ ပျောက်ခဲ့ပြီး အခြေခံလူထုအများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကုန်သွယ်စီးပွားပြုလာနိုင်တယ်။ လူမှုစီးပွား မြင့်တက်လာခဲ့တယ်။
● အင်္ဂလိပ်ကို ဘာမကျေနပ်ခဲ့ကြတာလဲ
ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဘဝကို ထိုက်သင့်သလောက် မြန်မာတွေ ခံစားခဲ့ရပေမဲ့ ဘာကိုမကျေနပ်ခဲ့ကြသလဲ။ ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ်ရှာစားရတဲ့ လူသာမန်အများစုဟာ အင်္ဂလိပ်အောက်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေး၊ စနစ်ရှိတယ် ဆိုတာ သိပေမဲ့ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းသာလိုချင်တဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်အခံရှိတယ်။ မြန်မာဘုရင်ခေတ်မှာ အခွင့်ထူးခံရတဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်း နဲ့ မင်းမှုထမ်းလူတစုကလည်း ဒီစိတ်အခံကို ပိုပြင်းစေတယ်။ သူများကျွန်ဘဝ၊ အထူးသဖြင့် ဘာသာ သာသနာ၊ လူမျိုး၊ စာ ပေ ဂုဏ်ညှိုးနွမ်းရခြင်းကို အသားပေးပုံဖော် လူအများကို နာစေတယ်။ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အတူပါလာတဲ့ လူမျိုးခြား လွှမ်းမိုးခံရမှု ကို မနှစ်လိုခဲ့ကြဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဝိုင်အမ်ဘီအေ၊ ဂျီစီဘီအေစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာပြီး အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ သန္ဓေတည်လာခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလာမှုအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေး (၁၉၂၃) ကို ကျင့်သုံးစေခဲ့တယ်။ မြန်မာတွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပိုမိုပါဝင်ခွင့်ရလာတယ်။
(၂၀) ရာစုအစ ကမ္ဘာမှာလည်း (၁၉၁၇) ရုရှားအောက်တိုဘာ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ လက်ဝဲဝါဒဟာ တဖြည်း ဖြည်း ထင်ရှားလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုအနေအထားမှာ (၁၉၃၀) ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ဆန်စပါး လုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ လယ်သမားတွေ ငတ်လာတယ်၊ လယ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့လယ်တွေ လူမျိုးခြား လက်ထဲ ရောက်ကုန်တယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးခဲ့မှုကို အထောက်အပံ့ အများကြီးပေးခဲ့တဲ့ ချစ်တီးတွေရဲ့ ငွေချေး လုပ်ငန်းဟာ စီးပွားပျက် မြေတွေဆုံးရတော့ နောက်ဆုံးမှာ အပြစ်ဖို့စရာ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ဒိုင်အာခီအုပ်ချုပ်ရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တောင်းဆိုသံညံနေချိန်မှာပဲ ဆရာစံဦးဆောင်တဲ့ လယ်သမား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ပေါ်လာပြီး အထွေထွေ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးကို တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ (၁၉၃၀) မှာ နောင် လွတ်လပ်ရေးမျိုးစေ့ဖြစ်မယ့် သခင်ဘသောင်း ဦးဆောင်တဲ့ သခင်အဖွဲ့အစည်း ပေါ်လာခဲ့တယ်။ နောက်တော့ အင်္ဂ လိပ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ (၉၁) ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်လည်း ဗြိတိသျှ-အိန္ဒိယကနေ ခွဲထွက် သီးသန့်ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
(၁၉၂၀) ပထမ ကျောင်းသားသပိတ်ဟာ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သလို (၁၉၃၆) ဒုတိယ ကျောင်းသား သပိတ်ဟာ နိုင်ငံရေးဝါဒကို အခြေခံတဲ့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ သခင်နု၊ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်ဗဟိန်း အစရှိတဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင့်ရေး လက်ဝဲဝါဒတွေကို တိုင်းပြည်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုကနေ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ (၁၃၀၀) ပြည့် အရေးတော်ပုံကြီးအပြီးမှာ လုံးဝလွတ်လပ်ရေး အတွက် နိုင်ငံခြား အကူအညီနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ဖို့ စိတ်ကူး စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး သခင်အောင်ဆန်းနဲ့ လူငယ်တစုဟာ ဂျပန်အကူအညီနဲ့ ခေတ်သစ်တပ်မတော်ဖွဲ့၊ အင်္ဂလိပ် ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်၊ ဂျပန်ကို ထပ်တော်လှန်၊ နောက်ဆုံး စစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်၊ နိုင်ငံရေး နည်းနဲ့ လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆို စတဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေပေါ်လာပြီး လွတ်လပ်ရေးရလာခဲ့တယ်။
● လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာ မှားသလား
မမှားပါ။ ယူခဲ့ပုံသာ မှားခြင်းပါ။ မြန်မာအပါအဝင် လူမျိုးစုအားလုံးဟာ လူမျိုးရေးရာကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ကြတယ်၊ အမြင် ကျဉ်းမြောင်းခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရေးရာမှာလည်း တယူသန် အစွန်းရောက်ခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ ပယောဂ မကင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်းဟာလည်း လွတ်လပ်စ တိုင်း ပြည်ကို ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ဘဝ လွတ်မြောက်ရေးမှာ စုစည်းခဲ့တဲ့ ဝါဒစုံ၊ လူမျိုးစုံ ညီညွတ်မှုဟာ လွပ်လပ်ချိန်မှာ အတ္တ၊ မာန၊ အာဃာတများကြောင့် ပြိုကွဲခဲ့ရတယ်။
လူမျိုးစုစုံရဲ့ ဥမကွဲ သိုက်မပျက်စိတ်ဓာတ်ဟာ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ သွေးထိုးမှု၊ လူမျိုးရေး သူငယ်နာမစင်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေး သဘောတွေ ကြောင့် မှေးမှိန်လာခဲ့တယ်။ အခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇) မှာကိုက ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ မျှတတဲ့ ပြည်နယ်၊ အာဏာ၊ ခွဲဝေမှု အုပ်ချုပ်ရေးသဘောနဲ့ အကြိုသဘောတူညီထားခဲ့တဲ့ ပင်လုံကတိကဝတ်တွေကို အပြည့်အဝ မဖော်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အချင်းချင်း သတ်ရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဖွားဖက်တော် အဖြစ် တွဲပါလာခဲ့တယ်။
● ကိုလိုနီ အမွေဆိုးလား
ဒါကို နောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင်များက ကိုလိုနီအမွေဆိုးလို့ လုံးလုံးခေါင်းစဉ်တပ်ချင်ကြတယ်။ အပြည့်အဝ မမှန်ပါ။ လူမျိုး ရေး အမြင်မကြည်လင်အောင် အင်္ဂလိပ်တွေ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီး နှစ် (၆၀) ကျော် လက်ရှိတိုင် တောင်လောင်နေရခြင်းဟာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးတဲ့ မူဝါဒတွေ၊ သဘောတွေ မမှန်လို့၊ ခွင့် တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် မတည်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်က အဓိကပါ။
● လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦး ဒီမိုကရေစီ (၁၀) နှစ်တာ
ဖဆပလခေတ် (၁၉၄၈-၅၈) မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဒုက္ခ ခံစားနေရပေမဲ့ အထိုက်အလျောက် ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒ ထွန်းကားခဲ့တယ်။ ကိုရီးယားပြည်တွင်းစစ်၊ နောက် ဗီယက်နမ်စစ်တွေကြောင့် ဆန်စပါး တင် ပို့နိုင်မှု ဈေးကွက်ကိုချုပ်ကိုင်နိုင်ရင်း တိုင်းပြည်စီးပွားလည်းတိုးလာတယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကနေ စက်မှုလုပ်ငန်းကို တက် လှမ်းနိုင်ဖို့ အစပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြွေးဒဏ်ကနေ နာလန်ပြန်ထူရုံမက ဒေသတွင်းမှာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအနေအထားမဟုတ်ပေမဲ့ လူမှု၊ စီးပွား၊ ကျန်းမာ၊ ပညာ အစစ အရာရာ လူအ များစု လူတမ်းစေ့အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်မှုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့တယ်၊ အလားအလာ ကောင်းခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ တဖက်ကလည်း ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်၊ တရုတ်ဖြူကျူးကျော်ခံရမှုဒဏ်ကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ သြဇာအာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင် ခွင့်ဟာ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီး စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားလုပ်ငန်း အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်လာတယ်။ ဒါတွေကို ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ စိတ်ကူးမိလာတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရေးမှာ ဖဆပလ မညီညွတ် နှစ်ခြမ်းကွဲမှုက စစ်တပ်နေရာဝင်ယူဖို့ အခွင့်ကောင်း ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ (၁၉၅၈) မှာ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံရေးအကွဲအပြဲကို ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အိမ်စောင့်အစိုးရအမည်နဲ့ အာဏာကို စတင်မြည်းစမ်းခဲ့တယ်။ (၁၉၆၂) မှာ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူကို အပြစ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမယ့် ရန်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီး တိုင်းပြည်ကို အပြီးအပိုင် မောင်ပိုင်စီးခဲ့ကြတယ်။
● စစ်ဝါဒ အောက်မှာ အရာရာပြိုလဲခြင်း
တော်လှန်ရေးကောင်စီ၊ မဆလပါတီ၊ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဒီမျက်နှာဖုံးများအောက်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ တိုင်းပြည်မှာ ကောင်းမွန် အခြေတည်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အလုံးစုံ ဆိတ်သုန်းစေခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ စာ နယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး ဖော်ဆောင်မှုဟာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုအောက်မှာ ကျဆုံးခဲ့ရတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒကို တလွဲအစွန်းရောက်သုံးခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်ကို တံခါးပိတ်၊ နားပိတ်၊ မျက်စိပိတ် ကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသားရေးစိတ်အခြေခံတဲ့ ပညာရေးမူဝါဒအမှားတွေကို ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ကျောင်း သားကို ပုန်ကန်သူအဖြစ်ပါ တွဲမြင်လာတာကြောင့် ပညာရေး စနစ်နဲ့ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို စနစ်တကျ အမဲဖျက်ခဲ့တယ်။ (၁၉၈၈) ဒုတိယအကြိမ် စစ်အာဏာ ထပ်သိမ်းချိန်မှာလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်များဟာ ဒါတွေကို မပြုပြင်ခဲ့ဘဲ ပိုသာဆိုးတဲ့ ဖိနှိပ်မှု၊ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဆယ်စုနှစ် (၅) စုကျော် မှာ အာဏာရစစ်အုပ်စုနဲ့ အပေါင်းအပါတစုသာ အရာရာ အသာစီးရ စံစားနေခဲ့ပြီ လူထုအများကတော့ ဆင်းရဲတွင်း နက်သထက်နက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအမှားအစုစုဒဏ်ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး၊ အာရှရဲ့ အ လားအလာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေ လွယ်လပ်ရေးရပြီး နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်အကြာ လက်ရှိမှာတော့ ဒေသတွင်းမှာ အနိမ့်ကျဆုံး၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် မြင်ရတော့တယ်။
● မျက်မှောက် အစိုးရသစ်
လက်ရှိမှာတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများဟာ ပြုပြင်ပြောင်လဲမှုတွေလုပ်နေတယ် ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် စစ်ဝါဒကြီး စိုးရေးအတွက် စီမံခဲ့တဲ့ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေကိုတော့ ပြုပြင်ပေးဖို့ ဝန်လေးနေကြတယ်။ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှု၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ် စိုးမိုးခဲ့မှု အပြစ်တွေကို အခုအချိန်ထိ ဝန်မခံနိုင်၊ အမှန်မမြင်နိုင် ဖြစ်နေကြတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ် အဟောင်း အသစ်များဟာ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို တပ်မတော်က ကျရာနေရာက ဝင်ယူခဲ့ရတာ မှန်တယ်၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍ လိုတယ် ယုံကြည်ဆဲ ဖြစ်နေတယ်။ အမှားတွေကို ဝန်မခံချင်၊ သမိုင်းသင်ခန်းစာမယူချင် အတ္တ၊ မာန၊ အုပ်စု အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်လိုဆဲ ဖြစ်နေတယ်။
● သင်္ကြန်အမြောက် ဗိုလ်ရှုခံ (သို့မဟုတ်) မလွတ်လပ်သေးတဲ့ လွတ်လပ်ရေး
စစ်တပ်စီးပွားအာဏာကို စိုးစဉ်းမျှ မထိပါးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအောက်က သမ္မတဆိုသူကလည်း ခပ်တည်တည်ပဲ အခုလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ သူ့သြဇာမတည်တဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အလေးပြု ဗိုလ်ရှုခံခဲ့တယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ စစ်တပ်ဟာ အရပ်သား သမ္မတအောက်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီလို အလေးပြုခံရခြင်းဟာ တကယ်တော့ ကြိုဆိုအပ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ စစ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာတော့ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ဟန်ပြသဘော အနှစ်သာရမဲ့နေဆဲပါ။ စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်း အပါတသိုက်သာ တိုင်းပြည်မှာ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားအဖြစ် သီးသန့်ရပ်တည်ရင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရာလွှမ်းမိုး ဗိုလ်ကျနေနိုင်ခွင့်ရှိနေခြင်းဆိုတဲ့ အခြေခံသဘောက မပြောင်းလဲပါ။ စစ်ကျွန်ဘဝ မလွတ်လပ်သေးတဲ့ ပြည်သူအများရဲ့ ဒုက္ခကတော့ ဗိုလ်ရှုခံရုံမျှနဲ့ လျော့သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ လူထု ချွေးနှဲစာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ကုဋေချီသာ အလဟဿ ကုန်သွားခဲ့တယ်။
● ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်းရမလိုလို
ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းအတွက် လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့ပြီးမှ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်း ဆက်လက် ကျွန်ပြုဖိနှိပ်ခံရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံသားများ လူမှု၊ စီးပွားအတွက် နိုင်ငံတကာ ကျွန်ထွက်ခံနေရတဲ့ဘဝ၊ နိုင်ငံကြီးငယ်များရဲ့ လူမလေးခွေးမခန့် ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခံဖြစ်နေရတဲ့ လက်ရှိအနေအထားဟာ “လွတ်လပ်ရေး”ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို မဲ့စေတယ်။ မှီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာစုံ တိုင်းသူပြည်သားများဟာ တန်းတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လူ့သိက္ခာအပြည့်ရှိ လူစဉ်မီတဲ့ “တကယ့် လွတ်လပ်ရေး” အရသာ ကို မခံစားရသေးပါ။ “အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်း” ဆိုသလို “ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်း ရမလိုလို” အမှတ်မှားနေကြရတယ်။
တကယ်တော့ တပ်မတော်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ မူဝါဒ၊ အကျင့်၊ အလုပ်တွေရဲ့ဒဏ် ရာစုဝက်ခံခဲ့ရပြီး ဓားမနောက်ပိတ်ခွေး ဖြစ်ခဲ့ရ တဲ့ လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို လွပ်လပ်ရေးအရယူပေးခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရှေးလူကြီးများသာ မြင်ခွင့်ရခဲ့ရင် “ငါတို့ လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့တာ မှားလေခြင်း” လို့ “လုံးဝ” ဆိုမှာ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းက တပ်မတော်ဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ သူမမြင်လိုက်ရတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းအမှားတွေကို မသိဘဲနဲ့တောင် ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ “ပြည်သူ ကို အလုပ်မကျွေးမပြုဘဲ ဖိနှိပ်တဲ့ တပ်မတော် ရှိနေခြင်းထက် မရှိခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်” တဲ့။
ဆိုတော့ လက်ရှိတိုင်းပြည်ကို ဗိုလ်ချုပ်သာ မြင်ခွင့်ရရင် ပြည်သူအတွက် အကျိုးမဲ့စေတဲ့ စစ်ဝါဒ၊ တပ်မတော်ကြီးစိုးမှု အလုံး စုံ ပပျောက်ရေးကိုသာ လမ်းညွှန်မှာပါ။ လူထု လူတန်းစားအသီးသီး သာတူညီမျှ လူမှုတရားမျှတမှု ရရှိစေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုသာ တိုင်းပြည်မှာ ရှင်သန်အမြစ်တွယ်အောင် တိုက်တွန်းမှာပါ။
(၂၀၁၅) နှစ်သစ် အခါသမယမှာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင် အဟောင်း/အသစ်များဟာ “ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်းရမလိုလို” ယုံမှတ် မှားနေကြရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပေမဲ့ မလွပ်လပ်နိုင်သေးဘဲ လူမှု စီးပွားဒဏ် ကျောကော့အောင် လှိမ့်ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ အများရဲ့ ဆင်းရဲနုံခြာလှတဲ့ ဘဝတွေကို အမှတ်တကယ် စာနာနားလည် ကိုယ်ချင်းစာရင်ဖြင့် အနာဂတ်ကောင်းအောင် ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင် အခြေခံအတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်၊ အယူဝါဒ၊ အလုပ် ပြောင်းလဲမှုများကို ဒီမိုကရေစီအင်အား စုနဲ့ပူးပေါင်း အမှတ်တကယ် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျာ။
(သည်လေဒီးစ် သတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ (၂)၊ အမှတ်စဉ် (၄၇)၊ (၂၀၁၅) ခုနှစ် ဇန်နဝါရ (၀၉) သောကြာနေ့ထုတ်၌ မူလ ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ယခု မိုးမခတွင် ထပ်မံ အွန်လိုင်း ဖြန့်ချိသည်။ ဆောင်းပါးပါ အာဘော် ကို ဝေဖန်ရန်နှင့် သမိုင်းအချက်အလက် ဆက်စပ်ထောက်ပြရန် မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် nyeinchanaye81@gmail.com သို့လည်း စာရေးနိုင်ပါသည်။)
မှတ်ချက် — ခေါင်းစီးဒီဇိုင်းပါ နောက်ခံဓာတ်ပုံ၏လက်ရာရှင်မှာ ကိုဆောင်းဖြူ (တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ၊ သည်လေဒီးစ် သတင်း ဂျာနယ်) ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သူတို့အာဘော်, အတွေးအမြင်, ငြိမ်းချမ်းအေး
2 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျွန်ခေတ်ကိုပဲ လွမ်းရမလိုလို
Aung on January 12, 2015 at 9:53 pm
The Independence Day is very significant for modern Burma history. Political struggle was determined to be Independent Sovereign State under colonial rules since 1920. Many Burmese in those days passed down their struggle to their children and their grand children. Independent Soverign State wasareal great dream for all Burmese in those days. The road to Independent Sovereign State was never be easy. Burmese had experienced Saya San Revolution, 1300 Revolution, World War II, Japanese Occupation, armed struggle to Japanese Occupation, Pro-Independent political struggle and so on. Although, Burma became sovereign state in1948, armed struggle of ethnic Burmese (Karen) began in 1949. Kuomintang spilled over into Burma from the results of China’s civil war escalated ethnic armed conflict in border area. Burma Communist Party chose for arms conflict with central government with political deadlock.
The situation enabled Gen Ne Win and his supporters in the army to have opportunity in political ambition through military coup d’etat. In 1962, the democracy and prosperity, human rights and freedom were gone down into drains. The military dictatorship began to grow with the mask of Burmese Way to Socialism. In fact, Gen Ne Win transformed Burma Army to his private army for his grip to hold the country. Many patriotic service man were out from Burma Army. Civil war with ethnic Burmese were getting bigger and Civil war frontier getting wider.
In 1988, Gen Ne Win chose to play with his private army to respress 8888 people’s revolution. However, once one of his hand pick Gen Than Shwe became in power, the political weather changse to Gen Ne Win’s day dream became nightmare. Strong Man became old man and helpless man. Last days of Gen Ne Win became prisoners at his house surrounded by his private army, in the hand of Gen Than Shwe.
Gen Than Shwe is afraid of retribution what he did to his predecessors, colleagues, subordinates, monks, students and people of Burma for his evils and sins. The 2008 Constitution was drafted to protect for him and his wrong doings. The 2008 Constitution was drafted to be Burmese Way to Democracy seemingly sugar coated democracy giving candle light for the darkness.
His hand picks share the the position of Public Administation and Head of State, Armed Forces Chief, and Head of Law Makers. Democracy Icon is tactically and wickedly welcome to Parliment for the ease of economic sanction and better image in international diplomacy. In fact, Democracy Icon has been cornered in his chess game.
Anyway, all Burmese and oversea Burmese are very eager for real change of fundamental human rights, genuine freedom, prosperity and independent, transperency and good governance, peace and federal union state. Democracy Icon is very valuable leader for present days. We need to see truly. We need to support right things. Independence has been stolen and it became personal belongings only for the people who live above the Law.The rough road is still ahead for longway. Generation by generation. Decades by decades. We all need to struggle to get rid of military dictatorship camouflaged with popular democracy cosmetic. We all need to be aware. We all need to be free from fear. We all need to restore our Independance robbed by military dictators.
Independance belongs to all Burmese. It isavaluable things from our ancestors.
Ba Ba Gyi on January 13, 2015 at 6:18 pm
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၅၀၀ကျော်ကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည်အနာဂတ္တံသဥာဏ်တော်ဖြင့်ရှေ့ရေးကိုကြည့်ပြီး “ငါဘုရား၏ သာသနာတ်ာကိုငါ၏သားတော်များဖြစ်သော ရဟန်းများက ဖျက်ကြပေလတ္တံ့ ”ဟုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းတုရဟန်းယောင် ရှင်တု ရှင်ယောင်တို့ ကြောင့် သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်လာသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်ကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာတော့ ဂေါတမဗုဒ္ဓကဲ့သို့ သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်လည်းမရခဲ့၊ အနာဂတ္တံသ ဥာဏ်တော်လည်းရှိသူမဟုတ်၍သာ စစ်တပ်၏ဖခင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိပါသည်။ အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်၍ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ကျွန်ပြန်လုပ်မည့်တပ်၊ သူ့ သမီးအရင်းကို
မည်” ဟုပြောခဲ့မည်မှာ မချွတ်ပါပေ။